सात्विक भोजनसहितको छठ पर्व, पहिलो दिन नहाय खाय
आस्थाको महापर्व छठअन्तर्गत बिहीबार पहिलो दिन नहाय–खाय विधि गरिँदैछ । चार दिनसम्म मनाइने छठपर्व अन्तर्गत पहिलो दिनमा नहाय–खाय विधि गरिन्छ । यस दिनलाई अरबा–अरबाइन पनि भनिन्छ । व्रतीले भोजनमा माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो, मसुर वस्तु परित्याग गरी यसै दिनदेखि व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ । छठपर्व अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइन्छ । यसका लागि कात्तिक शुक्लपक्ष लाग्नेबित्तिकै व्रतीले सात्विक भोजनका साथै अपवित्र मानिने दाल, तरकारी र… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ कार्तिक १४ गते बिहीबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ कार्तिक १४ गते बिहीबार, इस्वीसंवत अक्टोवर ३१ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार कार्तिकशुक्लपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज कार्तिकशुक्लपक्षको चतुर्थी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज ज्येष्ठा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा शोभन, करणमा वणिज रहनेछ भने आनन्दादि योगमा सौम्य रहनेछ । सूर्य तुला राशिमा,… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ कार्तिक १३ गते बुधबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ कार्तिक १३ गते बुधबार, इस्वीसंवत अक्टोवर ३० तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार कार्तिकशुक्लपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज कार्तिकशुक्लपक्षको तृतीया तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज अनुराधा नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा शोभन, करणमा वणिज रहनेछ भने आनन्दादि योगमा सौम्य रहनेछ । सूर्य तुला राशिमा,… पुरा पढौ
भाइटीका : पौराणिक कथन र रंगको महत्व
निधारमा लगाइएको सप्तरंगी टीका अर्थात तिहारको भाइटीका । यो पर्व समुदाय हिन्दू धर्मालम्बीहरुको बिशेष पर्व हो । तिहारको अन्तिम दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथिका दिन यो पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ। यो पर्व दिदीले भाइलाई र बहिनीले दाजुलाई अनि त्यसैगरी भाइले दिदीलाई र दाजुले बहिनीलाई विशेष मानसम्मानका साथ विधिपूर्वक पूजाआजा गर्ने, आशिर्वाद दिने लिने, मेवा, मिष्ठान आदि मनपर्ने कुरा ख्वाउने, दिदी बहिनीहरूलाई दान दक्षिणा एवं वस्त्र आदि दिने परम्परा छ।… पुरा पढौ
यमराजलाई कसले र किन मार्‍यो ? (पढौं कथा)
सर्वोच्च ईश्वर ब्रहृमाले मनुष्यलाई माटोबाट, देवताहरुलाई प्रकाशबाट र देवताको विपरित शक्तिलाई आगोबाट बनाएका हुन् भन्ने पौराणिक मान्यता छ । वेदान्तका अनुसार कुनैपनि आत्माको विकासक्रम अघि बढेर नै पितृ, देवी या देवता बन्ने गर्दछ । यो पनि मानिन्छ कि प्राचीनकालमा देवताहरु सशरीर धर्तीमा नै रहने गर्दथे र यहीँ बसेर मानिसहरुमाथि शासन गर्ने गर्दथे । यही शासनको विषयमा देवता र असुरहरुबीच समय समयमा युद्ध पनि हुने गर्दथ्यो । यो पनि भन्ने गरिएको… पुरा पढौ
भाइटीका : ‘दिदीबहिनी पश्चिम र दाजुभाइ पूर्व फर्किएर लगाउनू’
यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौं एवं अन्तिम दिन भाइटीका पर्व भोलि मंगलबार धूमधामसंग मनाइँदै छ । यस दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परानुसार पञ्चरंगी वा सप्तरंगी टीका लगाई मनाइँदैछ । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइबाट पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ । दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । भाइटीकाको टीका दिनभर लगाउन कुनै बाधा… पुरा पढौ
भाइटीका कसरी लगाउने ? (विधिसहित)
भाइतिहारको दिन दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, यमराजको आह्वान गर्ने, बिमिरो, ओखर, तेल, मखमलीको माला, दूबोको टीका, कटुस आदिको प्रयोग गर्ने प्रचलनको प्रतीकात्मक अर्थ हो, आफ्ना दिदीबहिनी र दाजुभाइ दुबै पक्षको सुखसमृद्धि, आरोग्य एवं दीर्घायु हुने धारणा । यस्ता छन् विधि १) निमन्त्रणा : दिदीबहिनीले भाइटीकाभन्दा पहिल्यै नै र कतैकतै त यमपञ्चक सुरु हुनु अगावै दाजुभाइलाई भाइटीकाको निम्ता स्वरूप पानसुपारी, फूल आदि दिने चलन छ । २) भाइटीकाका दिन… पुरा पढौ
गाई, गोरु र कृषक पूजा आज, म्हः पूजा २ दिन !
यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु र कृषकको पूजाआजा गरी मीठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता भनी सम्मान गरिन्छ। स्थानीय जातका गाईमा हुने जुरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिई दूध, गहुँत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्व छ भनी आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको… पुरा पढौ
गाईको धार्मिक, आर्थिक र वैज्ञानिक महत्व यस्ता छन्
यमपञ्चक वा महान पर्व तिहार अन्तर्गत आज गाईको पूजा गरी गाईतिहार मनाइन्छ । कात्तिक कृष्ण औंशीका दिन लोकमा गाईलाई लक्ष्मीको प्रतीक र गौमाता मानेर आमाको रुपमा पूजा गरिन्छ । गाईका शरीरमा सबै देवदेवता निवास गर्ने शास्त्रीय कथनअनुसार गाईपूजा गर्दा गाईका शिरदेखि पाउसम्मका अंगहरूको पूजा गर्ने चलन छ । गाईलाई सिंगारेर माला लगाई तेल घसेर सम्मान गरी मीठो खानेकुरा दिइन्छ । पूजाआज सकिएपछि गाई चराउन निकाल्ने मार्गमा तोरण तारेर चरणमा लैजाने… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ कार्तिक ११ गते सोमबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ कार्तिक ११ गते सोमबार, इस्वीसंवत अक्टोवर २८ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार कार्तिककृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज कार्तिककृष्णपक्षको अमावश्य तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज स्वाति नक्षत्र रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा प्रीति, करणमा नाग रहनेछ भने आनन्दादि योगमा छत्र रहनेछ । सूर्य तुला राशिमा,… पुरा पढौ